Ukuvavanywa komsebenzisi: Ekufuneni ulwazi lomntu ukuze uphucule amava abaThengi | Martech Zone
I-HTML elungiselelwe ayifumaneki.
Intengiso yale mihla imalunga nomthengi. Ukuze uphumelele kwintengiso esembindini yabathengi, iinkampani kufuneka zijolise kumava; Kuya kufuneka babonakalise uvelwano kwaye bamamele ingxelo yabathengi ukuze baphucule ngokuqhubekayo amava abawenzayo kunye nokuhambisa. Iinkampani ezamkela ukuqonda kwabantu kunye nokufumana ingxelo esemgangathweni kubathengi bazo (kwaye hayi idatha yophando nje) ziyakwazi ukudibana ngcono nokunxibelelana nabathengi kunye nabathengi ngeendlela ezinentsingiselo ngakumbi.
Ukuqokelela ukuqonda kwabantu kufana nokuzibeka ezicathulweni zabathengi bakho ukuze ufunde, uqonde kwaye uguquke kunye neemfuno zabo. Ngokuqonda kwabantu, iinkampani ziyakwazi ukubamba ubukrelekrele obuyimfuneko ukuze kufikelelwe kumthengi ngeendlela ezintsha, ezintsha, nezisebenzayo ezinokuba nefuthe elihle kwingeniso, ekugcineni nasekunyanisekeni.
Uvavanyo lomsebenzisi: Isishwankathelo seMveliso
Amava amabi kwiiwebhusayithi kunye neeapps, nakwilizwe lokwenyani, ayikhathazi abathengi kuphela, zibiza iinkampani izigidi zeedola ngonyaka. Uvavanyo lomsebenzisi yenza ukuba kube lula kwimibutho ukufumana ingxelo efunwayo kwimarike ekujoliswe kuyo- naphina apho bakhoyo. Ngeqonga lomsebenzisi elifunwayo, imibutho inokutyhila 'ukuba kutheni' emva konxibelelwano lwabathengi. Ngokuqonda injongo, amashishini anokuphucula kwaye anikezele ngamava amangalisayo, akhusele uphawu, kwaye aqhube ukoneliseka okukhulu kwabathengi. Ngeqonga lokuSebenzisa uTesting, amashishini anga:
target-Fumana unxibelelane nabaphulaphuli ngqo, ngaphandle komzamo, imijikelezo emide okanye iindleko ezinxulumene nokugaya abantu ngesandla ukuba banike ingxelo.
Fikelela kubathengi kunye neengcali zeshishini ezivela kwihlabathi liphela kwiimfuno ngeyona paneli inkulu, eyahlukeneyo eqinisekisiweyo yabathathi-nxaxheba.
Cofa kubathengi, abasebenzi, kunye namaqabane nge-imeyile, imidiya yoluntu okanye ezinye iindlela.
Ngena kwi-personas ethile, usebenzisa amandla okucoca, anjengejografi, inani labantu, kunye neendlela zoqoqosho lwentlalo.
Nxibelelana nabaphulaphuli abakhethekileyo kwaye kunzima ukufikelela kwiipaneli ngoncedo lweqela lethu leengcali.
Qinisekisa ukuba ufumana ingxelo ekumgangatho ophezulu kakhulu yokwazisa iinzame zakho ze-CX ngokuqinisekiswa nokuvavanywa komsebenzisi weqela lomsebenzisi kunye neqela leseshishini lobuchwephesha.
bandakanya-Khetha uhlobo lweemvavanyo oluya kuvelisa ezona zinto ziluncedo, ezinokuvela ngaphandle kweengxaki zolawulo okanye isidingo sobungcali bophando.
Fumana iimpendulo ngeeyure ezingama-1-2 usebenzisa itemplate, ukugaya ngokuzenzekelayo, kunye neempawu zokuvavanya nawaphi na amava.
Fumana ingxelo ngayo nayiphi na into, enje nge-desktop, usetyenziso lweselfowuni, okanye amava asemva kwesakhiwo, kunye neemveliso nakweliphi na inqanaba lophuhliso.
Ukusekwa ngokulula ukuze nabani na kwiqela lakho enze izifundo ezibukhoma okanye ezirekhodiweyo kuyo yonke iprojekthi, nangaliphi na ixesha.
Iziphumo ngaphakathi kweeyure zithetha ukuba unokuvavanya nantoni na ofuna ukuqonda kuyo umthengi, ususe uqikelelo olwenziweyo kutyalo-mali lwakho lweshishini- nokuba yeyiprototypes, imveliso yoyilo, imiyalezo yentengiso, imifanekiso yephulo, ikopi yewebhu.
Sebenza neengcali zethu xa ufuna uncedo ekuyileni izifundo ezinzima.
Qonda-Bamba kwaye ujonge ukusabela okunentsingiselo kunye neempendulo, emva koko wandise umbutho wonke ukwandisa intsebenziswano kunye nemvumelwano.
Ngalo lonke ulwazi lwabathengi kwindawo enye, uhlalutyo olukhawulezayo lunokwenzeka ngokudweba kwindalo iphela yedatha.
Ukukhupha kunye nokuqaqambisa ubukrelekrele bomthengi obubalulekileyo ukuqhuba ukuvumelana ngezigqibo ezifanelekileyo kunye namanyathelo alandelayo.
Ukwabelana ngamakhono kwenza kube lula ukuhlalutya iziphumo kuwo wonke umbutho.
Ngena kubathathi-nxaxheba ngokunika ubungqina obucacileyo, obungenakuphikiswa malunga nezinto ezifunwa ngabathengi, abazifunayo nabazilindeleyo.
Uvavanyo lomsebenzisi: lusebenza njani
Uvavanyo lomsebenzisi: Iimpawu eziphambili
Ukuvavanywa komsebenzisi kuqhubeka nokukhulisa iifayile zayo iqonga lokuqonda kwabantu kwaye ndongeze igalari entsha yeetemplate, ukuvavanywa kweempawu zokuvavanywa, ukuvavanywa komthi, ukudityaniswa kweQualtrics XM Platform, kunye neethegi ezikrelekrele.
I-analytics ye-Pair kunye nengxelo yevidiyo ukuqonda "kutheni" ngasemva kokulindelwe ngabathengi
Dibanisa iqonga labo leQualtrics XM ekwandiseni idatha yophando kunye nokuqonda okusemgangathweni, ukuzisa umxholo omkhulu "kutheni" emva kweziphumo zophando.
Lungiselela ukufunda komatshini ukuze ngokukhawuleza ubonise awona maxesha abalulekileyo kubathengi
Sebenzisa iithegi ezikrelekrele ukufumana kunye nokuqonda awona maxesha abalulekileyo kwiseshoni yempendulo yevidiyo
Thatha ithuba lokufunda ngomatshini ukuvavanya ingxelo yevidiyo kunye nohlalutyo ngexesha lokwenyani.
Ukuvavanya uMsebenzisi wam MyRecruit uxhobisa iinkampani ukuba zingene kumthengi wazo, umqeshwa kunye ne database yolwazi ukuqokelela ukuqonda kunye nengxelo. Ekuphononongeni amava ababukeli ababekhona, iinkampani zinokuqinisekisa ukuba zichonga iimfuno ezithile zeshishini ezingafezekiswayo ngoku.
Ngokufumana kwam umntu, unga:
Hlanganisa kwimfuno, inyathelo, ingxelo evela kubathengi abakhoyo, iingcali zeshishini, kunye nokunye.
Fumana ukuqonda ngokukhawuleza ngakumbi ngovavanyo lokuzenzela ngokwakho kunye nabaphulaphuli ekujoliswe kubo kakhulu.
Bandakanya abasebenzi kwaye wenze ukonwaba malunga negama lakho kunye neemveliso.
Ingxoxo yoMsebenzisi yokuHlola ngokuBanzi- Incoko ebukhoma ibonelela ngodliwanondlebe ophilayo, omodareyithiweyo orekhodwa ngokuzenzekelayo aze abhalwe phantsi ukuze kuqinisekiswe ukuba zonke izifundo ziyafakwa kwaye kwabelwana ngazo kuwo wonke umbutho. Incoko ebukhoma yenza ukuba kusuku olunye, 1: 1 iingxoxo zabathengi ezisebenzisanayo kwaye ixhasa ilizwi lamanyathelo abathengi. Udliwanondlebe bayakwazi ukuqaphela izinto ezingathethiyo, ezinje ngokubonakala kobuso kunye neethoni yelizwi ukuze uvelane ngcono nomsebenzisi wokugqibela- kwaye banokukhawulezisa ngokukhawuleza okanye baqondise ingxoxo ukuba baqhube izihloko ezithile okanye baqonde ngakumbi imeko yabathengi. Ngengxoxo ebukhoma, abathathi-nxaxheba banikwa ithuba lokubonelela ngakumbi ngemibuzo, babelane apho kuye kwahlangatyezwana nemiceli mngeni, kwaye banike inkampani izimvo zokuphucula.
Uphando lomntu wesithathu lubonisa ukuba amaqela ekugxilwe kuwo ngabantu anokuba nemiceli mngeni emininzi. Phakathi kwezi zinto kukuzibandakanya kwexesha, ingxaki yokugaya abavavanyi abafanelekileyo, iqela, kunye neendleko eziphezulu kunye nokukhetha isampulu. Ukuvavanywa komsebenzisi kuyayinciphisa le miqobo ngokwenza uphando lomsebenzisi (ukumodareyithwa okanye ukungabinamodareyitha), ukucela ingxelo yabathengi kunye / okanye ukuhambisa i-1: Udliwanondlebe olulula, olungabizi kakhulu, olufunwayo kunye nexesha langempela.
Ixabiso leShishini lamava abaThengi abaKhulu
Ngoku ka Forrester, Iipesenti ezingama-73 zeenkampani zijonga amava abathengi njengeyona nto iphambili, kodwa yipesenti enye yeenkampani ezisa amava amahle - kodwa ukuba ufuna abathengi bakho ukuba bahlale bethembekile kufuneka uzinikele ekwakheni amava. Ukuchaphazela ngokuqinisekileyo ingeniso esezantsi, kuya kufuneka uphathe kwaye utyale kumava abathengi kwaye wamkele ukufunda okuqhubekayo kunye nokufumanisa ukuze uhlale usenza kwaye uphucule kumava owazisa kumsebenzisi wokugqibela. Namhlanje, ubunkokeli kwintengiso kunye nokwahlulahlula ukhuphiswano kuya kusanda kugqitywa ekubeni ngubani onika olona lwazi lubalaseleyo lwabathengi. Iinkampani ezityala imali kwi-CX ziyaxhamla kulondolozo lwabathengi oluphuculweyo, ukoneliseka kwabathengi kunye nokwanda kokuthengisa kunye nokuthengisa amathuba
Ngoku sikwixesha apho amava kubathengi ayimfuneko kwinkampani esezantsi. Abathengi basekela amava amnandi kwizinto abacinga ukuba zinokuba ntle; ayixhomekekanga kumava ababenawo ngaphambili. Ngenxa yoku, kubalulekile ukubonelela iinkampani ngolwazi abanokuludinga ukuphucula ukuze bahlangabezane nokulindelweyo ngabathengi.
UAndy MacMillan, u-CEO woMsebenzisi wovavanyo
Bhalisela uvavanyo lokuSimahla loMsebenzisi
tags: UAndy MacMillanamava kumakhasimendeizicwangciso zamava abathengicxShishiniizixhobo zempenduloUyilo olugxile ebantwiniIqela leehotele leIntercontinentalincoko ephilayomicrosoftUhlalutyo losetyenziso lweselfowuniIngxelo yosetyenziso lweselfowuniukuvavanywa kwesoftwareukugaya kwamimveliso entshaIimpawu zeXMIngxelo yesizauvavanyouvavanyo lomsebenzisiukusebenzisekailizwi lomthengiwalmart canada
Uyicwangcisa njani i-PowerPoint yakho yeSilayidi kuMboniso weFestile enye yeZiganeko eziSebenzayo
Subbly: Qalisa inkonzo yakho yeBhokisi yokuBhalisela Ngeli Qonga lezoRhwebo